XOG: Wararkii ugu dambeeyay ee soo magacaabista golaha wasiirrada |
XOG: Wararkii ugu dambeeyay ee soo magacaabista golaha wasiirrada
Wararkii ugu dambeeyay ee saaka laga helayo madaxtooyada Soomaaliya ayaa sheegaya in lagu guda jiro kulamadii ugu dambeeeyay oo uu Ra’iisul wasaaraha la qaadanayo masuuliyiin kale duwan si uu ugu guuleysto soo xulitaanka golaha wasiirrada.
Ilo lagu kalsoonaan karo ayaa xaqiijiyay in Ra’iisul wasaare Cabdiwali Sheekh Axmed Maxamed uu soo magacaabi doono wasiirro badan kuwaasoo ay kamid yihiin saaxiibada ay sida aadka ah isugu dhow yihiin madaxweyne Xasan SHeekh, qaar kamid ah wasiirradii Farmaajo ee xukuumaddii Tayo.
Ra’iisul wasaaraha ayaa ka maarmi waayay howsha wacan ee wasiirrada xukuumaddii Tayo ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Cabdiwali SHeekh Axmed ayaa shalay kulan gaar ah oo uu la qaatay wakiilka Soomaaliya ee Qaramada Madoobe Nocholas Kay waxaana laga wada hadlay xukuumadda cusub.
Wararka qaar ayaa sheegaya in shalay waxyaabihii baajiyay qorshaha ra’iisul wasaaraha cusub ee doonayay inuu soo magacaabo golaha wasiirrada kulankan gaar ah ee Mr Kay.
Waxaa la filayaa in saacadaha soo socdo ee maanta Ra’iisul wasaare C/wali SHeekh Axmed inuu ku dhawaaqo golaha wasiirrada.
Waxaa sidoo kale ilo lagu kalsoonaan karo ay xaqiijiyeen in wasaaradaha qaar la kala qaadayo, sida tan wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga qaranka oo loo kala dhiibayo C/kariin Xuseen Guuleed iyo sidoo kale Mustaf Dhuluxow.
Ilo wareedyo sugan oo la hadlay Wakaaladda Warqaad ayaa tilmaamay in arrintan ay ugu wacan tahay qancinta beelo badan oo ku cabtay madaxweynaha isla markaana ku hanjabay haddii aanay wasiir helin in ay isaga baxayaan dowladda oo dhan arrintaas oo madaxweyne Xasan Sheekh si aad ah u gil-gishay.